२०१९ मा कुन कुन फुटबलरले लिए सन्न्यास?
सन् २०१९ मा फुटबल करिअरबाट थुप्रै खेलाडीहरुले सन्न्यास लिई सकेका छन् । २०१९ मा सन्न्यास लिएका स्टार ५ फुटबलर यस प्रकार छन् ।
विश्वका फुटबलका महान मध्यका गोलकिपर चेकले युरोपा लिग फाइनल २०१९ मा चेल्सीले आर्सनलाई ४–१ ले हराएपछि फुटबल करिअरबाट सन्न्यास लिएका हुन । ३७ वर्षिय उनलाई चेल्सीले २००४ मा अनुबन्ध गरेको थियो । पछिल्लो केहि सिजन उनी चेल्सी छाडेर आर्सनल पुगेका थिए । उनले प्रिमियर लिगमा चार पटक गोल्डेन ग्लोभ जितेका छन् । उनले चेक गणतन्त्रको लागि १ सय २४ पटक प्रतिनिधित्व गरे । उनले ७८१ खेल खेलिसकेका छन् भने १८ ट्रफि उचालिसकेका छन् ।
. प्याट्रिस इभ्रा
म्यानचेस्ट युनाइटेडका इभ्राले पनि यसै वर्ष सन्न्यास लिएका छन् । म्यानचेस्टर युनाइटेडका लागि ९ वर्ष खेलेका उनी उत्कृष्ट लेफ्ट ब्याकको रुपमा विश्वपरिचित छन् । युभेन्टसबाट पनि उनले अब्बल प्रर्दशन गरे । उनले फ्रान्सबाट ८१ खेलमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।इभ्रा ले ७७७ खेल खेलिसकेका छन् भने २४ गोल र २१ उपाधि उचालिसकेका छन्।
. रोबिन भान पर्सी
प्रिमियर लिगमा दुई पटक गोल्डेन बुट विजेता रोबिनले गत मे मा आफ्नो फुटबल करिअरबाट सन्न्यास लिएका हुन् । उनले आर्सनललाई धेरै पटक एक्लै गोल गर्दै जिताएका छन् । तर नेदरल्यान्डका लागि भने अभागी खेलाडीमा पर्दछन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेदरल्यान्डलाई उपाधि जिताउन सकेनन् । नेदरल्यान्डबाट १ सय २ खेलमा ५० गोल गरेका छन् । उनले ५९३ खेल खालेका छन् भने २ सय ७३ गॉल गरिसकेका छन् ।
रोबेन इतिहासकै उत्कृष्ट विजेता खेलाडीमा पर्दछन् । उनको खेल करिअर सफल रह्यो । उनले चेल्सी, रियल म्याड्रिड र बायर्न म्युनिखबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उत्कृष्ट प्रर्दशन गरे । उनी आफ्नो फुटबल करिअरमा धेरै समय चोटसँग जुध्नुपर्यो । तर जब उनी फिट भएपछि भने उत्कृष्ट प्रर्दशन गरिरहे । रोबेनले नेदरल्यान्डका सर्बश्रेष्ठ खेलाडीमा हुन् । राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दा नेदरल्यान्डलाई उपाधि भने जिताउन सकेनन ।रोबेनले ६०६, खेल खेलिसकेका छन् भने ३० वटा उपाधी थापिसकेका छन् ।
स्पेनका जाभी इतिहासकै उत्कृष्ट मिडफिल्डर मध्यका एक हुन् । जाभीले देश र क्लब दुबैमा आफ्नो प्रर्दशनमा राज गरे । उनले आफ्नो उत्कृष्ट प्रर्दशनमा दुई पटक युरोपियन च्याम्पियनस्पि र एक पटक विश्वकप जिताए । उनले ९४३ खेल खेलेका छन् भने ११३ गोल र २९ उपाधि पाएका छन् ।